Waxaad booqaneysaa hagaha kaliya ee qoysaska siiya macluumaad ku saabsan dhammaan iskuullada ku yaal Minneapolis.
Waxaan aaminsanahay in iskuulada wanaagsani ay awood u leeyihiin inay nolosha wax ka beddelaan. Ardayda ku nool Minneapolis ee ka qalin jabiya dugsi heer sare ah waxay lix jeer u badan tahay inay kasbadaan shahaadada dugsiga sare, taasoo keenta lacag dhan $ 900,000 oo dheeraad ah inta ay nool yihiin.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad u isticmaashid tilmaantan si aad uga caawiso helitaanka iskuul buuxiya baahiyaha tacliimeed iyo bulsho-shucuureed ee ilmahaaga, mid u diyaarin doona inay ku guuleystaan noloshooda, shaqadooda, iyo bulshada.
Hada oo la daabacay daabacadiisii 5-aad, Minneapolis School Finder waxay ka jawaabtay wicitaanada qoysaska si loo helo macluumaad tayo leh oo hufan oo saaxiibtinimo saaxiibtinimo leh. Sanadihii la soo dhaafay, Dugsiyada MN Weyn waxay la shaqeynayeen waalidiinta & la-hawlgalayaasha bulshada si loo horumariyo macluumaadka aan bixino.
Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad isticmaasho aaladaha cusub ee is-dhexgalka ah si ay kaaga caawiyaan inaad u hesho dugsiga ugu habboon ee ilmahaaga.
Waxaan aaminsanahay in cunug kastaa u qalmo iskuul u dejiya inay ku guuleystaan nolosha — iskuul bixiya natiijooyin adag oo tacliimeed & bixiya jawi la xirira, waxbarasho oo aamin ah. Waxaan rajeyneynaa in Minneapolis Finder Finder ay kaa caawin doonto inaad hesho!